रोचक Archives - News20 Media
टिकटक बन्द हुने तपाईहरुला कस्तो लाग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
July 9, 2021 N20LeaveaComment on टिकटक बन्द हुने तपाईहरुला कस्तो लाग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौ । नेपालमापनि टिकटक बन्द हुने भएको छ । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ । नेपालमापनि उमेर समूहलाई एकदमै भेरिफाई गर्न नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई टिकटकले भनिसकेको छ । धेरै विकृति आएको भनेर गुनोसो आएपछि साउन १ गतेबाट नेपालमा टिकटक एकाउन्ट बन्द गर्ने प्रस्ताव समेत आएको […]
May 30, 2021 June 15, 2021 N20LeaveaComment on रातारात फेरियो योगेशको बोलि, किन गरे एकाएक ओलिको प्रसंशा?
काठमाडौ, केही दिन पहिले माधव नेपाल समुहमा रहेर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको चर्को आलोचना गर्दै आएका एमाले नेता योगेश भट्टराई यटत बेला ओलिको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्न लागेका छन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको विभिन्न तह र तप्काबाट विभिन्न खाले टिप्पणी भईरहेका छ । तर पूर्वमन्त्री भट्टराईले हिजो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत […]
May 23, 2021 N20LeaveaComment on यसरी १८ मिनेट सम्म शरिरभरी मौरी, त्यस पछि के भयो हेर्नुहोस् ।
एजेन्सी, जेठ ९ हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले मौरीसँग फोटो खिचाएकी छिन्। जोलीले विश्व मौरी दिवसकोअवसरमा मौरीसँग फोटोशुट गरेकी हुन्। फोटोमा जोलीको शरीरमा मौरी टासिएको देख्न सकिन्छ। जोलीले यो फोटोशुट नेशनल जियोग्राफिकको सहयोगमा गरेकी थिइन्। फोटोशुटका दौरान जोलीको शरीरमा १८ मिनेटसम्म मौरी टासिएको थियो। पछिल्लो सम्बन्धबिच्छेदको घटना बढ्दो क्रममा छ । कतिपय सम्बन्धबिच्छेद श्रीमान् श्रीमती नै […]
काठमाडौं । संसारमा प्रायः विचित्रका समाचार हामीले सुन्ने गर्छौ । कति समाचार पत्याउने खाले हुन्छन् कति समाचार अपत्यारिला पनि । तर, कहिलेकाहीँ अपत्यारिला समाचार पनि सत्य हुन्छन् । नेपाली समाजमा विवाह पूर्व प्रायः केटाकेटीले माया गरेपनि समाजका अगाडि खुल्न डराउँछन् । विद्यालयमा पढ्दा शिक्षकसँग डराउँछन् । जसले सामाजिक मुल्यमान्यतालाई बचाएर राखेको हुन्छ । समाजमा सद्भाव […]
July 4, 2020 July 4, 2020 N20LeaveaComment on अनौठो शिवलिंग,जसको हरेक बर्ष उचाई बढदै जान्छ !
एजेन्सी – हिन्दु धर्ममा भगवान शिवलाई निकै मान्ने गरिन्छ र पुजा पनि गरिन्छ । भगवान शिवलाई सम्झिदै धेरै भक्तजनले शिवलिंगमा पुजा गर्ने गर्छन् । यस्तै भारतमा यस्तो अनौठो शिवलिंग छ जुन हरेक बर्ष बढ्दै जान्छ ।भारतको छत्तिसगढको जंगलमा रहेको यस शिवलिंग हरेक बर्ष बढ्दै जाने बताइन्छ । यो शिवलिंगमा धेरै मानिसहरुले पुजा गर्दै आएका छन् […]
काठमाडाैं ।असार ७ गते आइतबार (जुन २१ तारिख) नेपालबाट देखिने गरी खण्डग्रास सूर्य ग्रहण दुई नक्षत्रलाई समेट्दै मिथुन राशिमा लाग्दैछ । आइतबार बिहान १० बजेर ५० मिनेटबाट सुरु हुने उक्त ग्रहण मध्याह्न १२ बजेर ३८ मिनेटमा मध्यम अवस्थामा रहनेछ । अपराह्न २ बजेर २३ मिनेटमा पूर्णरुपमा ग्रहणले छोड्ने छ । उक्त ग्रहणले दुईवटा नक्षत्रलाई सन्धि […]